नेपाल लाइभ शुक्रबार, असोज २४, २०७६, ०६:३०
काठमाडौं- कसैले पाएका र गुमाएका कुराको लेखाजोखा कसरी गर्ला? कुनै कालखण्डका कुनै घटनाको विश्लेषणले सन्तुष्ट होला कि दुःखी? आफ्नै उमेरका काम सम्झेर के सोच्ला? कसरी तुलना गर्ला? त्यसमा मध्यमा रहन कति सम्भव छ? पक्कै कठिन। कि त देखिन्छ खुसीको उचाइ, कि त बेखुसीको गहिराइ।
यसमा उचाइ चुम्नेहरूलाई गहिराइको वास्तविकता जान्ने रहर लाग्छ, गहिराइमा रहेकालाई अग्लो हुने चाहले पिरोल्छ। उचाइ र गहिराइको सीमा तय गर्ने र त्यसबाट स्वतन्त्र बन्न सक्ने कमै हुन्छन्।
एउटा नाम छ, जसले जीवनको छोटो अवधिमै उचाइको सीमा चुम्यो, र भयानक गहिराइ पनि देख्यो। ऊ उचाइभन्दा अग्लिँदा मात्रै होइन गहिराइमै हुँदा पनि रमायो। त्यो ‘ग्यास च्याम्बर’ मा रहँदा र त्यसबाट निस्कँदा पनि विश्वले उनको नाम उच्चारण गरिरह्यो ... डिएगो म्याराडोना।
डिएगो अर्मान्डो म्याराडोना फ्रान्कोलाई न कुनै परिचयको खाँचो छ न त कुनै उपमाको। आफैंमा परिचय बनेको भव्य व्यक्तित्व र त्यसैमा समिटिएको स्वरुप। सम्झन चाहनेले स्नेहले सम्झिने अनि बिर्सन चाहने (सायद छैनन् कि)हरूले पनि भुलेर प्रेमले सम्झिने नाम हो, म्याराडोना।
म्याराडोनालेले विश्व फुटबलमा पाएको उचाइभन्दा अग्लो छ उनको सफलता। त्यति नै भयानक छ उनको दुःखद गहिराइ। उसैगरी फैलिएका छन्– उनका अनेक किस्सा। कतिपय किस्सा त उनलाई खेलाडी जीवनबाट पनि बाहिर राखिदिने गरी आएका छन्।
५८ वर्षअघि (सन् १९६०, अक्टोबर ३०) अर्जेन्टिनाको राजधानी रहेको प्रान्त ब्युनर्स एयर्सको लानुसमा जन्मेको बालकको नाम हो ‘डिएगो अर्मान्डो म्याराडोना फ्रान्को’। तीन दिदीपछि जन्मिएका उनी र उनीपछि जन्मिएर दुई भाइ, ह्युगो र राउल। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। यसले गर्दा उनको लालनपालन विभिन्न सहरमा भयो। किनकि उनका बुवाआमा कामका लागि अर्जेन्टिनाका विभिन्न ठाउँमा गए, सँगै म्याराडोना र उनका दिदी र भाइहरू पनि।
८ वर्षको उमेरमा म्यारोडोना खेल्दै थिए– स्थानीय क्लब इस्ट्रला रोजामा। प्रतिभाको खोजीमा त्यहीँ स्काउट टिम आयो। उनले काया बालकको भए पनि कला बयस्कको देखाए। अर्जेन्टिनोस क्लबको जुनियर टिमका लागि ट्रायल दिँदा उनले खेलको जादु नै देखाए।
बालक म्याराडोनालाई बाहिर ल्याएका उनको युवाकालका प्रशिक्षकले त्यसबेलाको सम्झना गर्दै भनेका थिए, ‘जब म्याराडोना अर्जेन्टिनोस जुनियर टिमका लागि ट्रायल दिन आएका थिए, म साँच्चिकै अचम्मित भएको थिएँ। मैले जे देखेँ पत्याउनै सकिन। त्यो कला देखाउने मात्रै ८ वर्षको बालक थियो। हो ऊ उमेरले बालक थियो तर उसको फुटबल कला परिपक्व। नपत्याएर हामीले उसको परिचय पत्र मागेका थियौं तर उसले साथमा ल्याएको थिएन। उसले हामीलाई सम्पूर्ण रुपले आफूमा समेट्यो र विश्वास गर्न बाध्य बनायो।’
उनी अर्जेन्टिनोस क्लबको जुनियर टिमका लागि छानिए। १२ वर्षको उमेरमा उनले अर्जेन्टिनाको पहिलो डिभिजनको एक खेलको हाफ टाइममा बलमा आफ्नो कला प्रस्तुत गरे।
म्याराडोनाले आफ्नो खेल जीवनमा व्यावसायिक करिअरको सुरूवात १६औं जन्मदिनको १० दिनअघि (२० अक्टोबर १९७६) अर्जेन्टिनोस जुनियर क्लबबाट गरे। १६ नम्बरको जर्सी लगाएर मैदान छिरेका म्याराडोनाले प्रिमियरा डिभिजनमा आफ्नो पहिलो गोल १४ नोभेम्बर १९७६ मा माप्र्लाटेनसी क्लबविरुद्ध गरे।
पाँच वर्ष (सन् १९७६ देखि १९८१ सम्म) अर्जेन्टिनोस जुनियरमा बिताएका उनले १ सय ६६ खेलमा १ सय १६ गोल गरे। त्यसपछि उनी ‘बोका जुनियर’मा अनुबन्धित भए। अरु क्लबले राम्रो रकमसहितको अफर गरे पनि म्याराडोना आफ्नो सपना पूरा गर्नका लागि बोका जुनियर तर्फ लागे। उनमा ‘बोका जुनियर’ क्लबबाट खेल्ने सपना लामो समयदेखि बाँचेको थियो।
गम्भीर प्रकृतिको हृदयघातले म्याराडोना कोमामा गए। उनको जीवनमा फुटबल थियो। गोल थियो। उपाधि पनि थिए। जसले उनलाई कदभन्दा कयौं गुणा अग्लो बनायो। तर होच्याउन त्योभन्दा पनि कमजोर बनाउन लागि परेका थिए उनको कुलत। पैसा, रक्सी, महिला र कोकिन उनका कमजोरी बनेका थिए। यो गल्तिबाट बाहिर आउन उनलाई होशमा रहेका बेला बल आएन। जब उनी कोमामा गए त्यसबेला उनकी छोरीले गरेको आग्रहले उनलाई गहिराइबाट बाहिर निस्कन सहयोग ग¥यो। हस्पिटलमै रहेका बेला छोरीले आफ्ना लागि भए पनि यो कुलत छोड्न आग्रह गरिन्। मधुरो सुनिएको यो आग्रहले म्याराडोनालाई बाँध्यो। झण्डै २० वर्ष अघिदेखिको कुलत उनले छोड्ने निर्णय गरे।
म्याराडोनाको जीवनका उकाली ओराली र फुटबल यात्रालाई भिन्न गरेर हेर्नै सकिँदैन। उनी जतिबेला विवादमा तानिए त्यसको असर फुटबलमा प्रत्यक्ष देखियो। जति पनि सफलता र माया पाए त्यसमा पनि फुटबल नै जोडियो।
हेर्नुस् म्याराडोनाको फुटबल स्किल
(यो सामग्री जोनाथन विल्सनको डर्टी फेसेस, बायोग्राफी डटकम, एनवाइ टाइम्स र फुटबल टाइम्समा आधारित रहेर नेपाल लाइभका ऋग्वेद शर्माले तयार पारेका हुन्। तस्बिरहरू फुटबल टाइम्सबाट लिइएका हुन्।)